China 3-Amino-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ya | Ihe ọhụrụ Hailun
Aha ngwaahịa:5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid; 3-AMino-
Usoro Molecular: C3H4N4O2
Molekụla arọ: 128.09
Jiri:Maka ọgwụ, pesticide, dye intermediates Dịka ọmụmaatụ, etiti nke ribavirin
White ma ọ bụ isi awọ ọcha crystalline ntụ ntụ
Ugbu a, anyị nwere nke ukwuu mepụtara ngwaọrụ. A na-ebupụ ihe anyị na USA, UK na ihe ndị ọzọ, na-enwe ọmarịcha ewu ewu n'etiti ndị ahịa maka orylọ Ọrụ Na-ere China 3-Amino-1,2,4-Triazole-5-Carboxylic Acid for Textile, Anyị ji obi ụtọ nabata ndị ahịa niile nwere mmasị ịgwa anyị okwu maka ozi ndị ọzọ na eziokwu.
Orylọ ọrụ na-ere China 3-Amino-1,2,4-Triazole-5-Carboxylic Acid, ndị otu na-ahụ maka injinia ga-adịkarị njikere ijere gị ozi maka ndụmọdụ na nzaghachi. Anyị na-enwe ike na-enye gị gị free samples izute gị chọrọ. O yikarịrị ka a ga-arụpụta mbọ kachasị mma iji nye gị ọrụ na ngwa ahịa kacha mma. Mgbe ị na-achọsi ike na azụmaahịa anyị na ngwaahịa na azịza ya, biko gwa anyị okwu site na izipu anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọọ anyị ngwa ngwa. N'ịchọ ịmata azịza anyị na mgbakwunye ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịbịa ụlọ ọrụ anyị iji lelee ya. Anyị ga-anabatakarị ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile na azụmaahịa anyị iji mepụta mmekọrịta azụmahịa na anyị. Gbalia ihu na inwere onwe gi igwa gi igwa anyi obere ahia ma anyi kwenyere na anyi ga ekesara ndi ahia anyi ahia kachasi nma.
Anyị nwere ugbu a ọtụtụ nnukwu ndị otu dị mma na mgbasa ozi, QC, ma na-arụ ọrụ na ụdị nsogbu dị iche iche site na usoro okike maka ire ere China Supplier 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid, Nabata niile mma J.Randall-agwa nkọwa nke ihe ngwọta na echiche na anyị !!
anyị ga-ewetara gị ngwaahịa na ngwọta na ọrụ bara uru karị, yana inye onyinye maka mmepe nke ụlọ ọrụ kemịkalụ n'ụlọ na mba ofesi. A na-anabata ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ ka ha sonyere anyị ka anyị wee tokọọ ọnụ.
Nke gara aga: 3-Amino-1, 2, 4-Triazole
Osote: 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole